Run ahaantii aan wehelkaaga waa wajiga ama indhaha, sida jirjirroolaha ah meel la mid ah?
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Run ahaantii aan wehelkaaga waa wajiga ama indhaha, sida jirjirroolaha ah meel la mid ah?
Ma joogaan in ay naftooda la dhamaystiro, waa nafta saaxiibkiisa aadanaha, sida dareemay oo waa in aanay noqon oo aan. Ama meel dareemaan muraaqooda kulan ee ay isku naf, sheeko in dhacaa dareen la yaab leh oo sida ama degay sabab qaar ka mid ah oo loo wada waxaa inta badan maqlay. Haddii ay jiraan qof noocan oo kale ah, fadlan soo socda isku day inaad hubiso sifooyinka ee jirka.
maxaa yeelay, maxaa yeelay waxa ay inta badan waa naf saaxiibkiisa in ekaan astaamaha jirka wanaagsan. Haddii uu jiro hal dhibic caadi on sifooyinka laga qaadayo si jidhka, waa in qofka u muuqda inuu yahay saaxiibkiisa naf. Haddii sensuously xunna iman dadka qaar waxay dareemaan, waxaa laga yaabaa inay hal dhibic ka caadiga ah ee jirkooda u gaar ah oo la yaab leh.
qayb ka ah sida ay noqon
saaxiibkiisa naf iyo inta la mid ah, tusaale ahaan, waa ay isku naf waxaa lagu magacaabaa eg qaybo ka mid wanaagsan, sida kuwan soo socda.
Tusaale ahaan, waxaa jira meel taas oo ay la mid tahay qayb ka mid ah, qaabka isha, sanka iyo dareenka afka, sidoo kale, sida ay lafta dhabarka, waxaa jira dad badan oo ilaa xad la mid tahay marka la barbar qayb ka mid ah oo kaliya. Sababta oo ah waxa aan in wejiga la mid tahay oo dhan, waa adag tahay in la fahmo at jaleecada hore, laakiin haddii aad u hubiso qayb ka mid wanaagsan, waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah in uu yahay la yaab leh la mid ah la iyaga u gaar ah.
? gacmaha iyo cagaha oo ah qaabka la mid
Tani waxay sidoo kale waa qayb yar oo ka mid ah jidhka, laakiin waxa ay u muuqataa waxaa jira mid aan aad u la mid ah ee foomka of gacmaha iyo cagaha ay yihiin. Ma aha oo kaliya qaabka guud, laakiin kiiska ayaa sidoo kale lagu ogaaday in kaliya jeclaan ilaa ay farta iyo qaabka musmaarrada, oo reading timireed. Haddii uu jiro marka aad ka eegi kartaa gacmaha iyo cagaha, fadlan si walba isku day la barbar dhigo iyaga u gaar ah.
? bar iyo waa meesha
sheeko la yaab leh oo ah burbur, laakiin haddii aad leedahay bar ah ama ama ay jiraan ama ku saabsan isku mid haddaad u taabo waa jagada, ama booska dhabanada ah (symmetric). Waxaa sidoo kale la sheegay in ay naf saaxiibkiisa kasta oo kale oo wadajir loo xaqiijiyo in ay joogaan, waxaa sameyn doonaa calaamad cad.
kale qoreysa D_ ? Timaha waa la mid ah, sidoo kale waxaa ka mid ah in tayada timaha waa la mid. Waxa kale oo ay u muuqataa, sida midabka timaha iyo qalbi engegnaantooda aawadeed, in ay dhacdo timaha kuweyga laga yaabaa in aad caado u eg.
qofkani? Oo waa
saaxiibkiisa naf Aan hubi haddii aad dareensan tahay, maxaa yeelay, waxa kasta oo kale waxaa soo jiitay si dabiici ah laga bilaabo wakhtiga aan la kulmay, waxaa laga yaabaa in aad hore u ogyahay dhinaca kale in ay tahay naf saaxiibkiisa wakhtigaas. Intaa waxaa dheer, haddii ay jiraan wax yaabahan in qayb ka mid ah mid ah in waqtigan in la soo bandhigay sida jirka ah uu u gaar ah, waxay rumaysan lahaydeen saaxiibkiisa naf waa ka sii xoog. feature
, wuxuu noqon doonaa hal dhibic si loo hubiyo in qofka uu yahay saaxiibkiisa naf si fudud. Haddii ay jiraan dad noqoteen dadkii iyo hawada-shidaalka hadda shukaansi, haddii aad hesho meel in ay la mid tahay iyaga u gaar ah, waxaa lagu talinayaa in aad u tagto is ogow in ay kobciso xiriirka la qofkaas.